Hihaona amin'ny Honor 7C, sokajy vaovao anelanelan'ny Huawei | Androidsis
Hihaona amin'ny Honor 7C, sokajy vaovao an'ny Huawei
Andro vitsy lasa izay, nilaza taminay izahay fa ny Honor 7C dia haseho amin'ity 12 martsa ity ihany, daty izay ahafahantsika mahalala ireo pitsipitsony sy toetra mampiavaka azy Huawei dia nampihatra tamin'ity afovoan-tany mahery ity izay naseho ora vitsy lasa izay.
Ity finday ity dia misy sisiny vitsy izany, tsy isalasalana, manolotra antsika volavola somary voadio ho fanampin'ny toetra ara-batana sy anatiny hafa izay hametraka azy amin'ny fifaninanana antonony amin'ity taona ity. Mahalalà azy!
Ny Honor 7C dia manana efijery 2.5D goavam-be misy famahana HD + 5.99 santimetatra 1.440 x 720 teboka novaina tamin'ny endrika efijery 18: 9 be mpampiasa izay ankafizinay indrindra. Ary koa, momba ny fanondroana anatiny, Izy io dia tonga miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 450 octa-core (4x 53GHz Cortex-A1.8 + 4 53GHz Cortex-A1.8) inona no ho hitantsika ao amin'ny Motorola Moto G6, fahatsiarovana RAM 3 / 4GB, ary habaka fitehirizana anatiny 32 / 64GB azo alaina amin'ny karatra microSD.
Ao amin'ny fizarana sary, Ity terminal ity dia misy fakantsary miverina roa heny misy 13 sy 2 megapixel ny famahana miaraka amin'ny LED Flash, ho fanampin'ny sensor 8MP anoloana miaraka amin'ny LED Flash.
Amin'ny lafiny iray, ny Honor 7C dia mametraka bateria 3.000mAh, ary mitondra Android 8.0 Oreo eo ambanin'ny sosona fanaingoana EMUI 8.0.
Mikasika ny vidiny sy ny fisian'ity telefaona ity, ny kinova misy RAM 4GB sy fitadidiana anatiny 64GB dia handoa 1.299 yuan (205 dolara hanovana), ary ny variant 3 / 32GB dia mitentina 899 yuan ($ 142) maotina. Ho hita amin'ny loko mainty, mena, volamena ary manga izy io.
FAMPANDROSOANA TEKNIKALY NY 7C
SCREEN 5.99 santimetatra HD + (1.440 x 720 teboka) endrika 18: 9
PROCESSOR Qualcomm Snapdragon 450 Octa-core (4x 53GHz Cortex-A1.8 + 4x 53GHz Cortex-A1.8)
FITONDRANA AN-TANY 32 / 64GB azo velarina amin'ny karatra microSD
CAMERA REAR Kamera 13MP + 2MP Dual miaraka amin'ny Flash Flash
CAMERA HATRANY 8MP miaraka amin'ny LED Flash
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 8.0 Oreo miaraka amin'ny EMUI 8.0
ASA hafa Mpamaky rantsantanana aoriana. Fanohanana Dual SIM
fandefasana 13 martsa any Sina
lafiny ARY Lanja 158.3 x 76.7 x 7.8mm ary 164 grama
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Hihaona amin'ny Honor 7C, sokajy vaovao an'ny Huawei
Ny Samsung Galaxy S9 koa dia hanana kinova Microsoft Edition